Nkwekọrịta njikọ aka a bụ nke e mere n'isi mbido izuụka a, dịka aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ nwechara nkenke nzukọ n'ebe obibi ya dị n'Amawbịa, ya na ndị ụlọ ọrụ SEMA na òtù ngalaba ọrụ agha ala anyị na-ahụ maka ịgbata ọsọ n'ọnọdụ mberede.
Nzukọ a bụ otu n'ime nzukọ weere ọnọdụ na steeti ahụ nso nso a dịka onye ndu ọhụrụ nke mpaghara '82 Division' nke ọrụ agha ala anyị, bụ 'Majọr General' Emmanuel Kabuk bịarutere steeti Anambra, ma bụrụkwa nke a nọrọ na ya wee tụpụtasịa atụmatụ dị iche iche etu ha bụ ndị ọrụ agha ala anyị ga-esi nye aka n'ibuso ìjú mmiri aka na steeti ahụ.
N'okwu ya na nzukọ ahụ, gọvanọ Obianọ mere ka a mara na ihe mere e jiri chọọ njikọaka ahụ bụ n'ihi mkpamkpa dị iche iche ìjú mmiri na-akpa na steeti ahụ ugbu a. O kelere ha bụ ndị ọrụ agha n'ihi ịgbata ọsọ enyemaka ha na ezigbo ụsà ha nyere na njikọ aka ahụ, ma kwekwa ha nkwà na ọ ga-agbakàrị ala ịhụ na e bunyere ndị ọrụ agha ahụ ụgbọelu na akụrụngwa ndị ọzọ ha ga-eji wee gbaga ọsọ enyemaka ma bàgide na ya bụ ọrụ ozigbo ozigbo n'ebe ahụ idè mmiri malitegoro inye nsogbu.
Na ntụnye nke ya na nzukọ ahụ, osote aka na-achị steeti ahụ bụ dọkịta Nkem Okeke kpọkukwara ndị ọrụ agha ahụ ka ha jisie ike chekwaba ụlọ ebe dị iche iche ndị ọnọdụ mberede dabidoro na-anọ, chekwabakwa ndị nọ ebe ahụ na ihe ha dị iche iche ha jiri biri.
N'aka nke ya, ode akwụkwọ ukwu nke ụlọ ọrụ SEMA na steeti ahụ, bụ Maazị Paul Odenigbo kelere ndị niile sonyere na nzukọ ahụ ma mekwa ka a mara na n'ime okpuru ọchịchị asatọ nọ n'ajọ ọnọdụ ìjú mmiri na steeti ahụ, na a ga-eji ime obodo dị n'okpuru ọchịchị Anambra Nọọtụ wee màlite ya bụ ịgbata ọsọ enyamaka n'ihi etu nsogbu nke mpaghara ahụ siri pụọ iche na ndị ọzọ.
Na nzaghachi, onye duru ndị ọrụ agha ala anyị wee bịa ya bụ ije, bụ 'Brigadier General' Mike Mamman bunyere ọchịchị steeti Anambra ụkpa ekele banyere nnabata ha na njikọ aka ha, ma rịọkwazie nke ọma ka e gosipụta nke ọma site n'eserese ebe ahụ iju mmiri na-enye nsogbo, iji wee nyere ha aka ịmàlite ọrụ, ịgbata ọsọ enyemaka n'ebe kwesiri ekwesi na itinyekwa akụrụngwa ndị ahụ a ga-ewèta n'ebe ha dị oke mpka. O kwekwazịrị nkwà ma gosipụtakwa ezi olile anya o nwere na njikọ aka ahụ ga-abụ nke ga-amịta ezi mkpụrụ karịa ka a tụrụ anya.